Gbagbo oo lagu haysto dil iyo kufsi - BBC Somali
Gbagbo oo lagu haysto dil iyo kufsi
30 Nofembar 2011
Maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada oo ku taal magaalada Hague, ayaa waxay sheegtay in Madaxweynihii hore ee Ivory Coast, Leurent Gbagbo, lagu soo oogay afar dembi oo ka dhan ah aadminnimada, kuwaas oo ay ka mid yihiin dil iyo kufsi.
Mr. Gbagbo, waxaa uu hadda ku xiran yahay dalka netherlands, ka dib markii shalay lagu qabtay dalka Ivory Coast.
Dacwad Oogaha Maxakamadda ICC, Luis Moreno-Ocampo, ayaa wuxuu sheegay in la hayo markhaati muujinaya in rabshadihii gacanta la isula tegey ee ka dhacay Ivory Coast sannadkii hore markii doorashada looga adkaaday Leurent Gbagbo, ay ahaayeen kuwo ay ula kac u abaabuleen taageerayaashiisu.
Saddex kun oo ruux ayaa ku dhintay dhowr bilood oo rabshado ay socdeen.
Rabshadahaasi waxay istaageen markii madaxweynihii doorashada ku guuleystay ciidankiisu ay awoodda la wareegeen.
Mr. Moreno-Ocambo wuxuu sheegay in labada dhinacba ay dembiyo galeen, isla markaana ay u dhowdahay in la weydiisan doono in dad kale la soo xiro.